Fambolena, fiompiana, jono : miandry vokatra indostrialy i Torkia | NewsMada
Fambolena, fiompiana, jono : miandry vokatra indostrialy i Torkia
Tonga nanao veloma ny minisitry ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina, Tazafy Armand, ny 4 oktobra teo, ny ambasadaoron’i Torkia eto Madagasikara, Volkan Türk Vural. Nanamafy ny fitohizan’ny fiaraha-miasa eo amin’ny lafiny toekarena ny masoivohon’i Torkia, nilaza fa « raha ny rehetra vonona miasa ho an’ny fampandrosoana marina, lasa lavitra i Madagasikara. Tombontsoa iombonana no tokony ho zahana », hoy i Volkan Türk Vural.
Taorian’ny fandalovan’ny filoha tiorka, Recep Tayyip Erdogan, ny volana janoary tamin’ity taona ity, nisy ny fiaraha-nidinika teo amin’ny firenena roa tonta momba ny sehatry fambolena, fiompiana ary ny jono. Manana traikefa sy fahaiza-manao betsaka amin’ireo i Torkia, izay efa tonga any amin’ny fanodinana indostrialy. Nitarika izany ny tale jeneraly iray avy amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy fiompiana any aminy, Ramazan Koçak.
Tsiahivina ihany koa fa efa nisy ny fihaonambe ara-toekarena teo amin’i Torkia sy i Afrika, nandraisan’i Madagasikara anjara, novambra 2016. naroson’i Madagasikara tamin’izany fihaonambe izany ny lafiny ara-barotra, momba ireo vokatra fanondrana any Torkia, toy ny tsaramaso, jirofo, kabaro, poavra. Tokony hihatsara hatrany izany varotra ivelany izany, raha ampy ny fanodinana ny vokatry ny fambolena, fiompiana, jono any amin’ny indostria.